ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်ပြီး ယုံကြည်မှုမြင့်မားတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ အမူအကျင့် (၅) မျိုး - For her Myanmar
News>Women News, Relationships>Letters From the Heart>Motivation
ဒီအချက်တွေ ယောင်းမှာ ရှိနေပြီလား?
ယောင်းတို့ရေ … (၂၁) ရာစုအမျိုးသမီးတွေက ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ အောင်မြင်နေကြပြီဆိုတာ သိကြတယ် ဟုတ်? သွက်လက်ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ်လည်းနောက်ကျကျန်မနေရစ်ဖို့ လိုပြီနော်။ ဒါဆို ပတ်ဝန်းကျင်က လေးစားအားကျရတဲ့ စူပါအမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်ကြလဲဆိုတာ Stella နဲ့တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင် …
(၁) ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ် … ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက သူ(မ)ရဲ့အားသာချက်တွေကို ကောင်းကောင်းကြီးသိထားတဲ့အတွက် ဒီအားသာချက်တွေကို ပါးပါးနပ်နပ်အသုံးချတတ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်တွေရှိလို့ကော စိတ်အားငယ်နေမယ်ထင်လား ? No ပါနော် … ဒီအားနည်းချက်တွေကိုလည်း ဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတာ ခေါင်းထဲရှိနေပြီးသားပါ။
အနားမှာ ဘယ်သူမှမရှိလို့ အရုပ်ကြိုးပြတ်ခွေကျသွားမယ့်လူတွေထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ လုံးဝမပါပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းလည်းဖြစ်တယ်၊ ရအောင်ရှင်သန်တယ်။ အခက်အခဲတွေကြုံလာရလို့ ဒူးထောက်ကျသွားရင်တောင် မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း ပြန်ထလာမယ့် ဖီးနစ်ငှက်လို မိန်းမသားတွေဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)သွယ်
ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်တာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲလို့ ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက် ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းဆိုပြီး ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းကြတယ်။ သူများကိစ္စလည်း စိတ်မဝင်စားသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း သူများတကာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ရှာတာကိုယ်သုံးပြီး ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်သာပိုင်တယ်လို့ ခံယူထားကြသူတွေပေါ့။
(၄) တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကို ဂရုတစိုက်ရှိတယ်
အမြဲလိုလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးပါပဲ။ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံးသန့်ပြန့်နေရုံတင်မကဘူး … အများစု မေ့လျော့နေတတ်ကြတဲ့ မိန်းမကိုယ်ကိုလည်း pH Care လိုမျိုး သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ ထောက်ခံချက်ရ အမျိုးသမီးသန့်စင်ဆေးရည်သုံးပြီး သန့်စင်ဆေးကြောပေးသေးတာဆိုတော့ အနံ့ဆိုးတွေကင်းစင်ပြီး ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားနေနိုင်တာ မဆန်းပါဘူး။
(၅) အစားအသောက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံကို ထိန်းထားတယ်
ကျန်းမာရေးနဲ့အညီ စားသောက်တာကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိခြင်းရဲ့ သော့ချက်တစ်ခုပဲနော်။ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ အသီးအနှံတွေနဲ့ အစေ့အဆန်တွေကို အမျိုးသမီးတွေက ကြည့်လိုက်ရင် သာမန်ထက်နုပျိုတက်ကြွလန်းဆန်းနေတာ အမှန်ပါပဲ။ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် မနက်ပိုင်း လမ်းလျှောက်၊ အပြေးကျင့်တာမျိုး၊ ညနေဘက် gym မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမျိုးလည်း ပုံမှန်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
ဒါကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ အချက်တွေပါ။ ယောင်းတို့ကော … ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု မြင့်မားတဲ့ ထက်ထက်မြက်မြက် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလား ?
ဒီအခကျြတှေ ယောငျးမှာ ရှိနပွေီလား?
ယောငျးတို့ရေ … (၂၁) ရာစုအမြိုးသမီးတှကေ ကဏ်ဍအသီးသီးမှာ အောငျမွငျနကွေပွီဆိုတာ သိကွတယျ ဟုတျ? သှကျလကျထကျမွကျတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ခတျေကွီးမှာ ကိုယျလညျးနောကျကကြနျြမနရေဈဖို့ လိုပွီနျော။ ဒါဆို ပတျဝနျးကငျြက လေးစားအားကရြတဲ့ စူပါအမြိုးသမီးတှေ ဘယျလိုပွုမူနထေိုငျကွလဲဆိုတာ Stella နဲ့တူတူကွညျ့လိုကျကွရအောငျ …
(၁) ကိုယျ့ရဲ့အားသာခကျြ အားနညျးခကျြတှကေို ကောငျးကောငျးသဘောပေါကျတယျ။
ဟုတျပါတယျ … ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိနတေဲ့ အမြိုးသမီးတှကေ သူ(မ)ရဲ့အားသာခကျြတှကေို ကောငျးကောငျးကွီးသိထားတဲ့အတှကျ ဒီအားသာခကျြတှကေို ပါးပါးနပျနပျအသုံးခတြတျပါတယျ။ အားနညျးခကျြတှရှေိလို့ကော စိတျအားငယျနမေယျထငျလား ? No ပါနျော … ဒီအားနညျးခကျြတှကေိုလညျး ဘယျလိုပွုပွငျရမလဲဆိုတာ ခေါငျးထဲရှိနပွေီးသားပါ။
အနားမှာ ဘယျသူမှမရှိလို့ အရုပျကွိုးပွတျခှကေသြှားမယျ့လူတှထေဲမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ လုံးဝမပါပါဘူး။ တဈယောကျတညျးလညျးဖွဈတယျ၊ ရအောငျရှငျသနျတယျ။ အခကျအခဲတှကွေုံလာရလို့ ဒူးထောကျကသြှားရငျတောငျ မကျြစိတဈမှိတျအတှငျး ပွနျထလာမယျ့ ဖီးနဈငှကျလို မိနျးမသားတှဖွေဈပါတယျ။
Related Article >>> ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုရှိစဖေို့ စိတျဓာတျမွှငျ့တငျပေးနိုငျမယျ့ နညျးလမျး(၅)သှယျ
ပြျောရှငျမှုကို ဖနျတီးပေးနိုငျတာ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲလို့ ကောငျးကောငျးသဘောပေါကျထားတဲ့အတှကျ ဖွဈသမြှအကွောငျးအကောငျးဆိုပွီး ဘဝကို ပြျောပြျောရှငျရှငျဖွတျသနျးကွတယျ။ သူမြားကိစ်စလညျး စိတျမဝငျစားသလို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလညျး သူမြားတကာနဲ့ နှိုငျးယှဉျနမှော မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျရှာတာကိုယျသုံးပွီး ကိုယျ့ဘဝကို ကိုယျသာပိုငျတယျလို့ ခံယူထားကွသူတှပေေါ့။
(၄) တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးကို ဂရုတစိုကျရှိတယျ
အမွဲလိုလို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိနခွေငျးရဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြကတော့ တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးပါပဲ။ ခေါငျးအစ ခွအေဆုံးသနျ့ပွနျ့နရေုံတငျမကဘူး … အမြားစု မလြေ့ော့နတေတျကွတဲ့ မိနျးမကိုယျကိုလညျး pH Care လိုမြိုး သားဖှားမီးယပျဆရာဝနျကွီးတှရေဲ့ ထောကျခံခကျြရ အမြိုးသမီးသနျ့စငျဆေးရညျသုံးပွီး သနျ့စငျဆေးကွောပေးသေးတာဆိုတော့ အနံ့ဆိုးတှကေငျးစငျပွီး ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ သှားလာလှုပျရှားနနေိုငျတာ မဆနျးပါဘူး။
(၅) အစားအသောကျနဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပုံစံကို ထိနျးထားတယျ
ကနျြးမာရေးနဲ့အညီ စားသောကျတာကလညျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုရှိခွငျးရဲ့ သော့ခကျြတဈခုပဲနျော။ အစိမျးရောငျဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ၊ အသီးအနှံတှနေဲ့ အစအေ့ဆနျတှကေို အမြိုးသမီးတှကေ ကွညျ့လိုကျရငျ သာမနျထကျနုပြိုတကျကွှလနျးဆနျးနတော အမှနျပါပဲ။ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကို ထိနျးသိမျးဖို့အတှကျ မနကျပိုငျး လမျးလြှောကျ၊ အပွေးကငျြ့တာမြိုး၊ ညနဘေကျ gym မှာ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာမြိုးလညျး ပုံမှနျလုပျလရှေိ့ပါတယျတဲ့။
ဒါကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ လကျတှကေ့ငျြ့သုံးနတေဲ့ အခကျြတှပေါ။ ယောငျးတို့ကော … ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှု မွငျ့မားတဲ့ ထကျထကျမွကျမွကျ အမြိုးသမီးတဈယောကျဖွဈပွီလား ?
Tags: #self-confidence, love, women
"အမေများနေ့" မှာ The Secretariat ကို ထက်ဝက်ဈေးနဲ့ လည်ပတ်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေး
Stylist တစ်ယောက်မှာ မဖြစ်မနေ ရှိရမယ့် အရည်အချင်း (၅)ရပ်